कंगनाले अक्षय कुमारको बारेमा किन गरिन् यस्तो खुलासा ? - Gokarna News from Nepal
कंगनाले अक्षय कुमारको बारेमा किन गरिन् यस्तो खुलासा ?
एजेन्सी– भारतीय फिल्म क्षेत्रकी चिरपरिचित अभिनेत्री कंगना रनौतलाई फिल्ममा अभिनय काम गर्ने अभिनेत्रीको रुपमा मात्रै होइन सामाजिक परिवर्तनका विविध विषयमा उनले व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिका कारण पनि चर्चामा आउने गर्छिन् ।
तर, कंगनाले अक्षयलाई बचाउ गर्दै महिला–केन्द्रित फिल्मलाई अगाडि बढाउनुमा अक्षयको भूमिका रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मिशन मंगल वास्तवमै महिला वैज्ञानिक फिल्म हो । यो उपलब्धी हो । तर अक्षयलाई यसको श्रेय जान्छ किनकी कमसेकम उनले यस्ता फिल्मलाई अगाडि बढाउँन त मद्दत गरिरहेका छन् ।’